Imigomo nezincazelo - Ukuhweba - Libertex
Home»Imigomo nezincazelo - Ukuhweba
Imigomo nezincazelo – Ukuhweba
Inani yangempela kuyinto Quote lapho Inkampani ilungele azokuqhubela Ukuhweba Umsebenzi at a Point esithile.
Cela Inani yinani lapho Client kungaba azokuqhubela Operation Ukuhweba ukuze BUY i wensimbi, ngoba Ukuhweba Terminals okuyinto ukuvumela kokuqhuba Ukuhweba Operations nge Ukusabalala.
Umuntu agunyaziwe Umuntu wemvelo noma ezomthetho ogunyazwe ngokusemthethweni ukuphatha noma ukuqhuba izenzo ezithile.
izimali Iyatholakala kukhona isizumbulu semali ukhonjiswe esigabeni Ibhonasi-Akhawunti we-Personal Abaphathi be-Akhawunti Portal ukuthi badluliselwe kusukela Ibhonasi i-Akhawunti -Akhawunti Ukuhweba bese esetshenziswa ngokuvumelana nemithetho amiselwe Ukuhweba-Akhawunti.
Balance kuyinto isizumbulu semali ku-akhawunti Ukuhweba Client sika ngaphandle Vula Tikhundla umphumela; Equity-akhawunti Ukuhweba kokucabangela imiphumela zonke Tikhundla Kuvaliwe and Non-Ukuhweba Operations.
Imali base kuyinto lwemali endaweni lwemali Pair okuyinto wathenga noma ithengiswe ngoba Currency Quote (Counter lwemali). Kungenxa numerator endaweni lwemali Pair (lwemali lokuqala ku pair).
Ibhidi Inani yinani lapho Client ungenza kuthengiselana BATHENGISE (ukuthengisa i wensimbi), kosetshenziselwa Terminals okuyinto vumela kokuqhuba Ukuhweba Operations nge Ukusabalala.
iBusiness Day kuyinto besikhathi kusukela 06:00 ukuze 15:00 GMT nsuku zonke, ngaphandle ngezimpelasonto namaholidi. Ukwaziswa kwamuva mayelana ngezimpelasonto namaholidi ishicilelwe Iwebhusayithi yeNkampani. Singasho sigudluke ngoba 1 ihora ngesikhathi ihlobo nobusika ngesikhathi shift.
CFD wensimbi is an instrument ngawo Ukuhweba Umsebenzi kuyenziwa ogxile ezinye yefa langaphansi. Kuvele yefa langaphansi kungafaka ukwabelana, yezimbiwa, indices, ikusasa kanye nezinye izinto, izizathu nezimo ngokwendlela ohlwini evunywe Inkampani. Ulwazi mayelana nenani CFD Instruments ishicilelwe Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Sula Balance kwemali - etholakalayo izimali zokuqaleka lapho Client akasebenzisi e Ukuhweba umsebenzi. Inani Sula Balance kwemali ibalwa yiNkampani ngokuvumelana nemithetho eyasungulwa Inkampani. Ulwazi on inani Sula Balance kwemali kungenziwa ebalulwe Siqu Abaphathi be-Akhawunti Portal kanye noma Ukuhweba Terminal.
Client ungumuntu wemvelo noma ezomthetho ongenela Isivumelwano ne Inkampani futhi uqhuba Ukuhweba Operations ngaphakathi kohlaka Sivumelwano tichibiyelo yayo.
-Akhawunti Iklayenti sika i-akhawunti ekhethekile-Akhawunti Personal Ukuphathwa Portal wavula yiNkampani ngokugcina izimali Client futhi siqhuba Ukuhweba Operations.
Isikhundla Kuvaliwe kuwumphumela ukukhishwa ingxenye Trip Round yesibili (Ukuhweba Ukusebenza ukuvala sesimweni).
-Akhawunti yeNkampani kuyinto akhawunti zamanje Inkampani e-isikhungo sezimali, i-akhawunti (isikhwama) ku-elektroniki yokukhokhelana kanye namanye ama-akhawunti kuhlanganise ama-akhawunti kwalabo Agents Ukukhokha.
Counter lwemali (Quote lwemali) kuyinto lwemali esetshenziselwa ukuthenga nokuthengisa Base lwemali. Encwadini lwemali lwemali Pair Counter imelelwa zifana (umuntu wesibili lwemali Pair).
lwemali Pair (Forex) kuyinto zezimali ezimbili (Base lwemali kanye Counter lwemali) okuyinto iqhaza a Ukuhweba Ukusebenza ngemali amathuluzi. Ulwazi mayelana nenani lwemali Pairs limelelwa Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Umthengisi is isisebenzi Inkampani ugunyaziwe isimo Quotes, ukuqapha ukunemba Ukuhweba Operations we Amaklayenti, isibambo ekhononda futhi uchaze izimo zokuhweba ezihlobene kokuqhuba Ukuhweba Operations ku-akhawunti Amaklayenti '.
Equity kuyinto ukulinganisela kwesamba izindleko izimali kwi-Akhawunti ye-Ukuhweba okuyinto lwakha nenani kwezimali ku-Akhawunti Ukuhweba kuhlanganise inzuzo ezinganeni (ukulahlekelwa).
Isikhathi sokuphelelwa kuyinto yokuphelelwa yisikhathi ka CFD wensimbi, Imisa nokuqhuba Ukuhweba Operations nge yefa langaphansi wamanje kanye ukuqala Operations Ukuhweba kokuqhuba nge kwesilandelayo. yisikhathi ngayinye CFD wensimbi amiswa iNkampani unilaterally futhi eshiwo Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
-Akhawunti Client sangaphandle sika i-akhawunti zamanje inhlangano yezimali, i-akhawunti (isikhwama) e yokukhokhelana electronic.
Intengo eme Ukwenza (Lapho isicelo) uhlobo Ukuhweba Operations ukubulawa lapho sekhasimende okokuqala unikezwe izingcaphuno ngokuqondile for beqhuba Ukuhweba Operation bese yena kuqinisekisa yakhe isifiso aqhube Ukuhweba Operation ngokuchofoza ngentengo ku Ukuhweba Terminal. Ngemva kokuchofoza ngentengo Trading Umsebenzi noma ukuqinisekisile iseva yeNkampani noma sekhasimende ahlinzekwa ukucela izingcaphuno for futhi siqhuba Ukuhweba Ukusebenza.
Izimali Ukuhoxiswa kuyinto Ukuhoxiswa izimali kusuka ku-akhawunti Ukuhweba Client futhi ngokudlulisela kwabo yakhe noma imininingwane yakhe yamuva yokusebenzisa ibhange noma imininingwane yasebhange Lomuntu yeklayenti sika agunyaziwe kukhonjisiwe yakhe noma esicelweni sakhe ukuhoxiswa.
Gap kukhona ukushintshwa ngentengo lapho Quote elandelayo ihlukile eyodwa langaphambilini eziningana (amashumi) ka Pips.
Hedging (Khiya) likuthola Vula Tikhundla ezimbili wensimbi efanayo lapho omunye isikhundla nokuthi eside omunye imfushane.
kokuqala Imajini (imajini Izidingo) kuyinto eseduze edingekayo ukuze uvule isikhundla. Imajini Izimfuneko wensimbi ngamunye kufanele icaciswe ku Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Ukwenza i-Instant uhlobo Ukuhweba Operations ukubulawa lapho Client ufisa ukuba aqhube Ukuhweba Operation ngokuchofoza ngentengo ku Ukuhweba Terminal. Uma intengo namanje langempela a Ukusebenza Ukuhweba kuqinisekisiwe. Uma Quote ku Ukuhweba Terminal akuyona langempela okungangako Client inikezwa intengo entsha kosetshenziselwa Ukusebenza ukubulawa. Ukunikezwa azokuqhubela Ukuhweba Umsebenzi at intengo entsha isebenza kule nkathi Limited. I Client ngeke uvume ukuba kungenzeka Ukuhweba Ukusebenza ukubulawa ngasiphi Inani yangempela kwiseva Inkampani kufanele imizamo Client sika ekhaya azokuqhubela Ukuhweba Ukusebenza ngokuphindaphindiwe (akukho esingaphansi 2 (ezimbili) imizamo ilandelana) yaliwe iseva yeNkampani ngenxa ukushintsha kwezinkathi Inani yangempela kuseva.
ithuluzi lwezezimali kuyinto Spot wensimbi kanye (noma) CFD wensimbi. Ulwazi mayelana nenani Instruments limelelwa Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Thola kuyinto lihlela isilinganiso phakathi kwama ivolumu a Ukuhweba Ukusebenza kanye nenani kokuqala Imajini.
Umkhawulo (Thatha inzuzo) is awuhlobo inikezwe i-oda uma i-oda enjalo isethwe ukuthengisa ngentengo (izinga) futhi ingaphezulu wamanje emakethe izinga noma ukuthenga ngentengo (izinga) okuyinto ingaphansi kwe-zamanje emakethe izinga. Injongo eyinhloko Umkhawulo oda iwukuba ekuqinisekisa Ukuhweba Operation ukubulawa ngentengo akuyona okubi kakhulu ukwedlula omunye licaciswe ku-oda.
Ngena Ifayela kuyinto ingxenye Ukuhweba Terminal futhi (noma) i-akhawunti ye-Personal Ukuphathwa Portal senzelwe ukulungisa (ukuqopha) idatha idluliselwe by the Parties komunye nomunye phakathi nosizi olukhulu kweSivumelwano nge Ukuhweba Terminal futhi (noma) i-akhawunti ye-Personal Ukuphathwa Portal. Njalo ukufinyelela kweSivumelwano Party kuya Ukuhweba Terminal noma i-akhawunti ye-Personal Ukuphathwa Portal liyakushunyayelwa ilungiswe Ifayela Log futhi sebekopishelwa iseva yeNkampani. I amaseva acasisiwe main Imininingwane umthombo futhi owamukelwa Companies njengoba ubufakazi uma Ngokuhlola izimo ayiphikiseki exhunywe ne ukugcwaliseka kwalesi Sivumelwano. Ulwazi oluvela Ifayela Log Kweseva yeNkampani kufanele kube yinto eza kuqala eliphelele phezu kwezinye agumenti lapho sicabangela isimo ayiphikiseki kuhlanganise maqondana ulwazi kusuka ifayela Log we Iklayenti sika Ukuhweba Terminal futhi (noma) i-akhawunti ye-Personal Ukuphathwa Portal. Inkampani igodla ilungelo hhayi ukulungisa Eqinisweni lokufinyelela kweSivumelwano Party kuya Ukuhweba Terminal noma Okomuntu siqu-Akhawunti Management Portal Ifayela Log.
Long Isikhundla ukuthenga i wensimbi ne nokulindela ukuthi intengo yayo (Inani) bayovuka.
uLoti umthamo esezingeni i wensimbi maqondana lapho Operation Ukuhweba uqhutshwa. Omunye Ukuhweba Umsebenzi iqhutshwe ukuze eziningi eziningana noma izingxenye zawo. Amasayizi ukwenziwa kwenkatho ngezingubo wensimbi ngamunye kanye nohlobo Ukuhweba Terminal kufanele icaciswe ku Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
imajini Level (Equity Level) kuyinto lihlela isilinganiso phakathi kwama Ukulingana kanye Imajini Kudingeka, wezwakalisa njengoba amaphesenti.
imajini Kuyadingeka (Izimali agodliwe, imajini) is isamba ivinjiwe Ukuhweba-Akhawunti yeklayenti yokulondoloza zonke zakhe (wakhe) Vula Tikhundla. Imajini Izidingo ezidingekayo Vula Tikhundla ngoba wensimbi ngalinye elishiwo Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Market Ukwenza (Inani yangempela) uhlobo Ukuhweba Operations ukubulawa lapho Client ufisa ukuba aqhube Ukuhweba Operation Esevumelene ngaphambi ukuthi Ukuhweba Operation eziyokhishwa ngentengo okuyinto langempela kwiseva yeNkampani (ngaphandle ukunikela entsha Quotes).
Mid Inani intengo phakathi Ibhidi futhi Cela Amanani okuthi Client kungaba azokuqhubela Ukuhweba Ukusebenza e Ukuhweba Terminals okuyinto vumela kokuqhuba Ukuhweba Operations ngaphandle Spread.
Okuphidaphindayo kuyinto lihlela isilinganiso phakathi kwama-trade lemali amaphesenti ushintsho Libertex esibulalayo futhi intengo ecashile kwefa, Imali Base iphesenti intengo ushintsho. Ulwazi yakamuva mayelana osayizi esiphezulu multipliers ngoba wensimbi ngalinye ishicilelwe Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Non-Ukuhweba Ukusebenza kuyinto ekusebenzeni ukudluliswa kwemali futhi (noma) ukubhala izimali ngiwunqume Ukuhweba-Akhawunti yeklayenti kanye nezinye Operations ayixhunyiwe ngqo kubulawa Ukuhweba Operations.
Vula Isikhundla kuyinto inani wensimbi uthenge (noma kuthengiswe), engamboziwe ukudayiswa okuphambene (ukuthenga) we wensimbi ofanayo esilinganayo futhi (noma) ivolumu; umphumela ukubulawa ingxenye yokuqala ye-trade nokubuya (Ukuhweba Operations yesikhundla ukuvulwa). Ngenxa yalokho okuvula isikhundla Client has icala a) azokuqhubela ephambene Ukuhweba Operation ukuvala isikhundla kwenani elifanayo; b) silondoloze Level Imajini hhayi ngaphansi kuka leli elasungulwa yiNkampani (I-terminals usebenzisa lo mqondo).
Order (Pending Order, Umkhawulo, level) kuyinto Oda Iklayenti sika okunemibandela azokuqhubela Ukuhweba Ukusebenza uma izimo, esabekwa weklayenti Ukuhweba Terminal Client tiyafezeka; it is wayesikisela ukuthi umyalelo abanjalo bayakuba abulawe ngesikhathi esingashiwongo esikhathini esizayo ngokuhambisana nenqubo oda ukubulawa esachazwa tichibiyelo kulesi sivumelwano. Iyatholakala izinhlobo Order kuxhomeke Ukuhweba Terminal ekhethwe Client.
Point (PIP) ingenye kulencane abalulekile Quote iyunithi okuyinto 0,0001 noma 0,01 kuncike wensimbi. Ushintsho we Quote for 1 (eyodwa) iyunithi esigabeni junior kusho ukushintsha 1 (eyodwa) PIP.
Inani Okuphakelayo is Quotes uchungechunge ithunyelwa Ukuhweba Terminal kuhlanganise zonke Quotes olunikezwa Inkampani kuya Amaklayenti phezu izicelo zabo futhi wonke amanani of empeleni olwenziwa Ukuhweba Operations.
Quote lwemali (Counter lwemali) kuyinto lwemali lapho ngentengo ye-wensimbi is anikezwe. Encwadini lwemali lwemali Pair Counter imelelwa zifana.
Quote intengo okuthi Operation Ukuhweba nge wensimbi ungentiwa.
Mode Quote (Uhlobo Ukwenza) kuyinqubo lobuchwepheshe ekutholeni (eqinisekisa) yentengo zamanje nokwenza umsebenzi wezandla yi Client. Iyatholakala Quote Amamodi ziyehluka okuncike izinhlobo Ukuhweba Terminals Nezinsimbi zakha futhi kucacisiwe kule tichibiyelo okuhambisanayo kulesi sivumelwano.
Siyagcwaliseka (okungaguquki) Umphumela lwezezimali kuyinto Umphumela lwezezimali ku Uhambo Round. Negative Umphumela lwezezimali ku Uhambo Round kuyinto ukulahlekelwa Iklayenti sika, umuntu omuhle uba umphakathi ozifunela inzuzo.
Uhambo olujikelezayo luyinhlanganisela ezimbili ephambene Ukuhweba Operations ne ivolumu efanayo (ukuvula isikhundla ayo okuphetha okwalandela): ukuthenga ne ethengisa okwalandela noma ukudayisa ngokuthengwa okwalandela ngokuphathelene nesikhundla ne Ticket efanayo (I-ID).
Isikhundla iDemo athengisa of instrument balindele ukuthi amanani alo (Inani) ngizakwehlela.
Spot Instruments kukhona Imali Pairs nezinsimbi okuyinto iqhaza Ukuhweba Operations ngokuvumelana nemithetho wemakethe endaweni. Uhlu Spot Instruments esetshenziswa Inkampani siyadingeka ku Iwebhusayithi yeNkampani kanye ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
ukusabalala umehluko phakathi Cela Inani kanye Ibhidi Inani i wensimbi, obonakaliswe Pips. Ukusakazeka ingase yehluke kuye ngesistimu nezimo zezimakethe.
Misa Ukulahlekelwa is uhlobo eyabelwe Order Client sika uma uma i-oda enjalo isethwe ukuthengisa ngentengo (izinga) okuyinto ingaphansi kwe-zamanje emakethe izinga noma ukuthenga ngentengo (izinga) futhi ingaphezulu wamanje emakethe izinga. Injongo eyinhloko Stop oda kuyinto azokuqhubela Operation Ukuhweba intengo emakethe elidlale intengo Order sika kufinyelelwe ngenani i wensimbi sika.
Misa-Out kuyinto lokuvala esiyisibopho izikhundla Client nganoma amanani amanje emakethe lapho i Level elamukelekayo ukulahlekelwa kufinyelelwe. Imithetho lokuvala esiyisibopho izikhundla Client sika ziyahlukahluka kuye esetshenziswa Ukuhweba Terminal futhi zichazwe tichibiyelo Nemithetho Ukuhweba Operations.
Misa-Out Level kuyinto inani ukulahlekelwa phezu Isikhundla Vula (tikhundla) we Client wezwakalisa njengoba amaphesenti okuyinto uma ukufinyelela trigger lokuvala esiyisibopho Isikhundla (tikhundla) yiNkampani ngentengo yangempela ngaphandle kwesaziso we Client. Misa-Out Amazinga ngayinye Terminal Ukuhweba kucacisiwe ku Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha on Server yeNkampani. Uma noma yimuphi nokushintshashintsha ulwazi olushiwo on Server yeNkampani uyakumahlula.
ushintshashintsha kuyinto ukudluliselwa kwe-Isikhundla Vula we Client kusuku olulandelayo. I-oda nokulandelela imigomo ushintshashintsha amiswa iNkampani uhlobo Trading Terminal ngamunye.
Tshwaya ushintsho sakugcina ngentengo ye-instrument. Amanani eqondile Imikhaza kubo bonke Instruments ishicilelwe Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Ithikithi (I-ID) kuyinto inombolo kamazisi ehlukile ukuthi Inkampani inelungelo ayinikeze isiphi isikhundla evuliwe noma Pending Order of a weklayenti Ukuhweba Terminal.
Ukuhweba-Akhawunti i-Akhawunti ekhethekile Iklayenti sika ku uhlelo lokugcina imininingwane ye Inkampani esetshenziswa ke nokugcina ithrekhi yonke imiphumela Non-Ukuhweba Operations, ukuhweba Imiphumela, Vula Tikhundla, Ama-oda kanye nezinye izenzo kanye izicelo yeklayenti ukuthi ehlongozwe yilo Isivumelwano futhi tichibiyelo yayo.
Ukuhweba Day kuyinto besikhathi kusukela 21:00:00 ukuze 20:59:59 (GMT), ngaphandle ngezimpelasonto namaholidi. I ukuvulwa kanye lokuvala nesikhathi Ukuhweba Day kungenziwa sigudluke ngoba 1 ihora ngesikhathi ihlobo nobusika isikhathi ushintsho. Ukwaziswa kwamuva mayelana ngezimpelasonto namaholidi limelelwa Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani.
Ukuhweba Amahora kuyinto besikhathi phakathi nalapho Ukuhweba Operations ukubulawa noma Order ukubekwa i wensimbi kungenzeka. Ukuhweba isikhawu wensimbi ngalinye elishiwo Iwebhusayithi yeNkampani bese usetha ukuhweba amaseva zayo. Imininingwane Ukuhweba seseva eziyoba icala kukhona noma ikuphi ukungafani. Phakathi Non-Ukuhweba Amahora Ukuhweba Operations ibulawa ngesihluku futhi-oda ukubekwa (ukulungiswa) akunakwenzeka.
Ukuhweba Ukusebenza is ukuguqulwa phezu-the-counter ukusebenza nge kwezezimali okwenziwa phakathi yeklayenti kanye Inkampani kwimodi non-okungase kwenziwe, i.e. eyohlinzwa lokusho noma ukuthengisa i wensimbi, lapho imigomo «ukuthenga» noma «ethengisa» ezibhekwa matemu njengoba akukho ukudluliselwa kobunikazi i wensimbi. Ukuhweba Imisebenzi olwenziwa endaweni yeNkampani.
Ukuhweba Operation Ivolumu kuyinto inani wensimbi okuyinto kuthengiswa noma ngithenge e eziningi, Amayunithi yokukala elihambisana wensimbi noma isamba ukuhweba lwemali ye Balance (kuncike esetshenziswa Ukuhweba esibulalayo).
Ukuhweba Terminal isofthiwe ezikhethekile kanye hardware, okuyinto eyenza yeklayenti zivumelana Inkampani nge inethiwekhi computer emhlabeni wonke mayelana nemigomo abalulekile nemibandela Ukuhweba Operations ababulawa phakathi kohlaka lesi sivumelwano kanye ukuqopha imigomo evunyiwe nemibandela, setha yesula oda. I Ukuhweba Terminal kuvumela ukuthola ulwazi lwezimali ezivela ezimakethe zezimali zomhlaba, ukuthumela imiyalo ku-Inkampani futhi wamukele iziqinisekiso imibiko evela Inkampani. I Ukuhweba Terminalshall ukunikeza ukuhlonza of the Parties (ukuqinisekiswa of the Parties) ukuthi imiyalezo exchange kanye ubumfihlo kanye nobuqotho imiyalezo ngosizo amathuluzi esakhelwe yokuvikela cryptographic. Elicacisiwe software kanye hardware amasethi zihlanganisa ulwazi kanye yokuhweba platform Libertex kanye nezinye izinhlelo Kunconywa ukusetshenziswa yiNkampani ngenjongo yokukhipha Sivumelwano.
Ifa eyisisekelo iyigugu okuyinto esisekelweni i wensimbi futhi okuyinto wathenga noma ithengiswe ngenkathi beqhuba Ukuhweba Operations. Ezicashile Asset kungenziwa emelelwa lwemali (Imali base), amasheya, yezimbiwa, indices, ikusasa kanye nezinye izinto, izizathu nezimo ngokwendlela ohlwini evunywe Inkampani.
ezinganeni (Floating, yamanje) Umphumela lwezezimali(Floating Inzuzo / Loss) kuyinto Umphumela lwezezimali yeOpen Tikhundla ngamanani samanje Instruments. Negative Umphumela lwezezimali yeOpen Tikhundla kuyinto Ukulahlekelwa Floating, umuntu omuhle kuyinto Inzuzo Floating.
Ukuhoxiswa Uhlobo is omunye izinhlobo Izimali Ukuhoxiswa enikeziwe ibe weklayenti Siqu sakhe-Akhawunti Management Portal.
Inkhulumo iNhloko yoMnyango Product - LIBERTEX
Ukuhweba platform Libertex